Xiisad ka oogan degmada Balcad iyo ciidamada Dowladda oo xirxiray odayaal dhaqameed
Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in saakay degmada Balcad uu ka jiro kacdoon dadweyne oo ay isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn ee degmadaasi Balcad, kaddib markii maamulka Dowladda ee halkaasi ka arrimiya ay ku soo rogeen canshuur qiimaheedu aad u sareeyo.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay dadweynaha degmada Balcad iyo hareeraheeda degan ayaa saakay dibadbaxyo waaweyn ka dhigay guud ahaan degmada Balcad, iyagoo socod dheer ku soo maray xarumaha maamulka, saldhigdda degmada iyo xafiisyada maamulka Degmada Balcad oo ay uga cabanayaan canshuuraha lagu soo rogay.
Cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka degmada Balcad oo iyagu ku soo baxay dibadbaxyadaasi ayaa kala eryay dadkii dibad baxayay oo markii ay arkeen ciidamada ku soo socda kala firxaday, hase yeeshee ciidamada ayaa qabqabtay dhowr ka tirsan odayaasha dhaqanka oo iyagu dibdbaxyadaasi ka qeyb qaadanayay kuwaasi oo ay xabsiga u taxaabeen.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in maamulka degmada Balcad uu odayaasha ku eedeeyay inay ka dambeeyay abaabulka dibadbaxyadaasi, waxayna cirka ku sii shareertay cabashadii dadka degmada Balcad ay ka muujinayeen canshuuraha lagu soo rogay beeraleyda degmada Balcad.
Dhinaca kale waa markii ugu horeysay oo degmada Balcad ay ka bilaabato xiisad u dhaxeysa maamulka degmada iyo dadka degaanka, inkasta oo toddobaadkii la soo dhaafay degmada Balcad ay ka jireen dibadbaxyo kuwaan la mid ah oo dadweynaha ay uga cabanayeen musuqmaasuq raashin gargaar oo xubno ka tirsan maamulka ay ku lug yeesheen.